Mitady loko mifanaraka amin'ny zava-misy kokoa noho i Pantone? Tsy azo atao | Famoronana an-tserasera
Loko tena izy sa Pantone? Fantaro ny tsy fitoviana
Ao amin'ny tontolon'ny graphic design ny loko dia iray amin'ireo akora ilaina indrindra, tsy maintsy fantaro ny fampiasana sy ny fitaovany manerantany kokoa hahafahana miasa miaraka amin'izy ireo nefa tsy voafitaky ny efijery.
Voalohany indrindra dia zava-dehibe ny fahalalana hoe inona ny rafitra Pantone na ny Pantone Matching System (PMS) dia rafitra mamela mamantatra loko ho an'ny fanontana amin'ny alàlan'ny kaody manokana. Amin'ny teny tsotra, dia rafitra fampifangaroana loko, izay manamora tokoa ny asan'ny mpamorona sary.
Mianara bebe kokoa momba an'i Pantone
Ny vokarin'ny orinasa Pantone dia ny ravin-taratasy baoritra fanta-daza ny lanja sy ny endriny sasany miaraka amin'ny fanontana santionany miloko, ny anarany ary ny raikipohy hahazoana azy ireo. Fa maninona izy ireo no mora ho an'ny mpamorona sary?
Betsaka ny antony, saingy ny iray izay azo heverina ho manandanja indrindra dia mamela anao ireo torolàlana ireo, na inona na inona ny rafitra miasa, monitor na sary editor ampiasainao izany ny loko output amin'ny fanontana dia marina. Azafady, mariho fa miseho ireo takelaka loko amin'ny maody RGB ary mety hamitaka im-betsaka izany, saingy amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Pantones dia azontsika antoka fa efa ao anaty ny pirinty Plotter, Offset na Digital Ofsset marina foana.
Pantones miasa mihoatra ny CYMK, maodely miloko mampihena. Ity maodely 32-bit ity dia miankina amin'ny fampifangaroana pige cyan, magenta, mavo ary mainty mba hamoronana ny loko hafa. Ity modely ity dia mifototra amin'ny fandraisana ny hazavana Ny loko asehon'ny zavatra iray dia mifanitsy amin'ny ampahan'ny hazavana latsaka amin'ilay zavatra ka tsy voadoka ao.
Fa ny tontolon'ny fanontana niitatra tamin'ny fanavaozana ny Colour Spot, loko izay mampiasa loko manokana sy mihoatra ny azon'ny fifangaroan'ny Cyan, Magenta, Yellow ary Black, toy ny mety ho metika na fluorescent ampiasaina matetika eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sary.
Amin'ny lafiny iray ny tena loko na RGB, dia maodely miloko mifototra amin'ny synthetic additive izay mamela ny maneho loko amin'ny alàlan'ny fampifangaroana (isa) amin'ireo loko maivana telo (mena, maitso ary manga). Ity maodely ity dia tsy mamaritra samirery izay tena dikan'ireo loko ireo, noho izany ny sanda RGB mitovy dia afaka mampiseho loko tena samy hafa arakaraka ny fitaovana mampiasa ity maodely loko ity, ary na dia ny fampiasana maodely mitovy aza, ny habaka miloko afaka miovaova be. Iray amin'ireo antony ny famolavolana sary dia mandray ny torolàlana Pantone ho an'ny asany.
Fantatrao izao ny fahasamihafana, miankina aminao ny miasa modely iray na hafa.
Sary mitarika: Designer.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Palety miloko » Loko tena izy sa Pantone? Fantaro ny tsy fitoviana
Juan | sary masina maimaim-poana dia hoy izy:
Rehefa nanambatra fitambarana loko ho an'ny fanontana efijery faharoa izahay dia nisafidy ny lokoko tamin'ny palette CMYK fototra tao amin'ny Adobe Illustrator. Niezaka nitandrina tsara aho tamin'ity indray mitoraka ity, nandefa ny soatoavina CMYK sy kaody Hexidecimal ho an'ny loko ka nokasihiko avokoa ireo fototra. Fa rehefa nalefako tany amin'ny mpanonta ny sary sy ny loko, dia tsy dia marina araka izany ny valiny. Manontany aho hoe inona ny marika fanontam-pirinty no tena atolotra indrindra hahazoana ny loko miloko tadiaviko?
Mamaly an'i Juan | sary masina maimaim-poana
Autodesk 3ds Max iray amin'ireo rindrambaiko famoronana sary tsara indrindra